Thursday December 08, 2016 - 16:04:27 in Wararka by Super Admin
Diyaaradaha dagaalka xukuumadda Shiicada Ciraaq ayaa Xasuuq daran ugaystay shacab Muslimiin sunni ah xilli ay ku sugnaayeen galbeedka wadankaasi.
Wararka ka imaanaya wadanka Ciraaq ayaa sheegaya in ugu yaraan 120 qof shacab ah ay ku dhinteen duqeyn ay diyaaradaha dagaalka F16 ee Mareykanku ugu deeqday xukuumadda Baqdaad ay ka geysteen magaalada Al-qaa’im ee dhacda Xadbeenaadka ay wadaagaan Ciraaq iyo Suuriya.
Goob joogayaal ayaa Telefeshinka Afka Carabiga ku hadla ee Al Jazeera u sheegay in Meydadka 100 qof lagu arkay suuqa weyn ee magaalada Al Qaa’im halka Meydadka 20 qof haween iyo carruur ah lagu arkay waddooyinka magaalada.
Wuxuu ahaa Xasuuq bahalnimo ah oo ay geysteen diyaaradaha xukuumadda shiicadu ku badantahay ee kajirta magaalada Baqdaad, guddoomiyaha Baarlamaanka xukuumadda Dabadhilifka Ciraaq ayaa xaqiijiyay in Xasuuqan cusub ay geysteen diyaaradaha xukuumadda isagoo ku eedeeyay ciidanka cirka in si ula kac ah ay u duqeeyeen bartilmaameedyo Rayid ah.
Magaalada Al Qaa’im oo qiyaastii 500 KM ujirta magaalada Caasimadda ah ee Baqdaad waxaa ku dhawaad 2 Sanadood xiriir ah gacanta ku haya xoogaga IS oo dagaal kula jira Mareykanka iyo xulufadiisa shiicada ah.
Dhinaca kale Warbaahinta Rasmiga ah ee Afka xukuumadda Ciraaq ku hadasha ayaa xaqiijisay in si duqeyn si khalad ah u dhacday ay dad ku laysay Al Qaa’im balse saacado kadib ayay mas’uuliyadda duqeynta u wareejisay "diyaarado aan heybtooda lagaran.
Diyaaradaha Mareykanka Oo Dad Shacab Ah Ku Duqeeyay Duleedka Kismaayo.